Imithwalo yomtya kunye neBelt Factory - China Imithwalo yomtya kunye neBelt abavelisi kunye nabaxhasi
Imitya yeempahla ibaluleke kakhulu ukwenza umthwalo ubekhona. Nokuba kungasetyenziswa iimoto zabucala, oololiwe okanye iinqwelomoya, ityesi yomtshato iya kufakwa ngokulula, umthwalo osesutikheyisini uya kuba ngobunzima. Oko kuyinkathazo ngokwenene. Ngoncedo lweentambo zemithwalo, yongeza amandla angaphandle kwisutikheyisi ukulungisa umthwalo. Ukwahlula njani ityesi yakho kwiindawo zikawonke-wonke, enye inokusebenzisa iisutikheyisi zohlobo olufanayo kunye nemibala efanayo, ukwahlula ityesi yakho ngoncedo lweentambo zomthwalo. Umsebenzi omnye lowo. Ukongeza, inokongeza ilogo kwimitya yemithwalo. Ke imitya yemithwalo ingasetyenziselwa njengezipho zokunika abahambi. Iinqwelo-moya zikhetha olu hlobo lwezipho zokupha. Ibhanti liveliswa ngee-intshi ezimbini ububanzi, ephethe ukhuseleko ekubambeni ukugcina umthwalo uvaliwe ngokukhuselekileyo. Izinto ezahlukeneyo zinokukhethwa njenge-polyester, i-nylon kunye nezinto zokulingisa i-nylon. Phakathi kwezi zinto, izinto zenayiloni zikowona mgangatho uphezulu kwaye zihlala ixesha elide. Ukulinganisa inayiloni yinto elandelayo kwaye emva koko zizinto zepolyester. Inokwenza ukhetho olufanelekileyo ngokujonga ukusetyenziswa kwayo kunye neendleko zayo. Inkqubo eyahlukeneyo inokusetyenziswa kwi-logo enje ngokushicilelwa kwesilika, ukuprinta kwe-CMYK, ukuprintwa okukroliweyo, ukunitha kunye nokunye.
Imitya yeLugguage kunye neebhanti